Kushambadzira & Kutengesa Mavhidhiyo | Martech Zone
Analytics, zvemukati kushambadzira, email kushambadzira, yekutsvaga injini kushambadzira, yemagariro midhiya kushambadzira uye tekinoroji mavhidhiyo pane Martech Zone
Artificial Intelligence (AI) Uye Iyo Revolution YeDhijitari Kushambadzira
Chipiri, Gunyana 28, 2021 Chipiri, Gunyana 28, 2021 Isaja Karadovska
Dhijitari kushambadzira ndiyo musimboti webhizimusi rega rega ecommerce. Iyo inoshandiswa kuunza mukutengesa, kuwedzera ruzivo rwe brand, uye kusvika kune vatengi vatsva. Nekudaro, musika wanhasi uzere, uye ecommerce mabhizinesi anofanirwa kushanda nesimba kuti akunde makwikwi. Kwete izvozvo chete-ivo vanofanirwa zvakare kuteedzera eazvino tekinoroji maitiro uye kushandisa mashambadziro ekushambadza zvinoenderana. Imwe yazvino zvigadzirwa zvehunyanzvi izvo zvinogona kugadzirisa kushambadzira kwedhijitari ndeyekunyepedzera ungwaru (AI). Ngatione kuti sei. Nyaya Dzakakosha Ine Dzanhasi
Nudgify: Wedzera Wako Shopify Shanduko Neiyi Yakabatanidzwa Yemagariro Proof Platform
Svondo, Nyamavhuvhu 29, 2021 Svondo, Nyamavhuvhu 29, 2021 Douglas Karr
Kambani yangu, Highbridge, iri kubatsira kambani yemafashoni kuvhura yakananga-kune-vatengi nzira mukati. Nekuti ivo ikambani yechinyakare inongopa vatengesi chete, vaida mudiwa anozobatsira kuve yavo tekinoroji ruoko uye kuvabatsira neese maficha ekuvandudza kwavo brand, ecommerce, kubhadhara muripo, kushambadzira, shanduko, uye maitiro ekuzadzikisa. Nekuti vane mashoma maSKU uye havana chiratidzo chinozivikanwa, takavasundidzira kuti vatange pachikuva chaive chakagadzirira, chinotyisa, uye
Ecamm Live: Inofanirwa-Kuva neSoftware yeYese Rarama Streamer
Chipiri, August 24, 2021 Chipiri, August 24, 2021 Douglas Karr
Ndakagovana maitiro andaive ndaunganidza hofisi yangu yekumba kutepfenyura uye podcasting. Iyo posvo yakanga iine ruzivo rwakadzama pamusoro pehardware yandakanga ndaunganidza… kubva padhesiki rakamira, mic, mic ruoko, michina yekuteerera, nezvimwe. Pasina nguva, ndanga ndichitaura neshamwari yangu yakanaka Jack Klemeyer, anozivikanwa John Maxwell Coach naJack. akandiudza kuti ndaifanira kuwedzera Ecamm Live kune yangu software maturu ekuti nditore yangu yepamhepo kudhiza kumusoro notch.
Optimizely Intelligence Cloud: Mashandisiro Ekushandisa Stats Injini KuA / B Kwayedza Yakangwara, Uye nekukurumidza
Chipiri, August 24, 2021 Chipiri, August 24, 2021 Ryan Lucht
Kana iwe uri kutsvaga kumhanya chirongwa chekuyedza kubatsira rako bhizinesi bvunzo & kudzidza, mikana uri kushandisa Optimizely Intelligence Cloud - kana iwe wakambozvitarisa. Optimizely ndechimwe chezvishandiso zvine simba mumutambo, asi senge chero chishandiso chakadai, unogona kuchishandisa zvisiri izvo kana ukasanzwisisa kuti chinoshanda sei. Chii chinoita kuti Optimizely ive nesimba? Pakati pechimiro chayo chakaiswa panorara vanoziva zvakanyanya uye